Ahoana ny fampiasa ilay sondage (ahoana no mi voter?)
Mila s'inscrire enao vao afaka mi voter @ sondage. raha invité fotsiny enao dia limité be ny zavatra azonao atao fa misorata anarana.
Raha hisoratra anarana dia tsindrio eto s'enregistrer
Ny tombotsoan'ny fisoratana anarana
1- Tsy ho site-n'ny colezy mihitsy io fa ho lasa site-n'ny ancien.
2- Tsy hireprésenter ny anciens akory mihitsy io satria tsy maintsy ireo izay nivoaka ivelan'ny firenena ihany no tena ho ao, raha tsy hoe hahazo internet isan-tokatrano ny gasy. Firy isan-jatony anefa izay??!!
Ataovy hoe site-n'ny ancien vitsivitsy tao amin'ny kolejy dia OK! Fa raha tsy izany dia manjary entinareo ao koa ny anaran'olona hafa tsy nanaiky ny momba an'ilay site akory.
Papay a écrit:
Misy marina tokoa ny resahanao ary tsara fipetraka ilay fanamarinana fa tsy site "officiel" an'i saint jo mihitsy ilay izy fa ho siten'ny "ancien"(mety ho vitsivitsy mety ho maro be koa...) Ho hita eo izay hiantsoana azy fa ny tena zava-dehibe dia ny hisian'ny "site" iray izay hahafahan'ny ireo olona nianatra tao fahiny hifanerasera indray. Tsy mifidy na avy aiza na avy aiza. Ilay tsy fanekena ve mety ho fantatra ny antony?
Ilay tsy fanekena ve mety ho fantatra ny antony?
Manahoana indray e!
Ireo efa nolazaiko ireo no antony nampa-réticent an'ah ka. Dia izay ihany
Raha ohatra manko hoe hanao "siten'ny StJo" tsy misy accord-n'ny StJo dia heveriko fa tsy mety izay.
Raha ohatra koa hanao "siten'ny ancien" kanefa ancien am-polony vitsivitsy amin'ireo aman'arivony any no hanao azy, dia heveriko fa tsy mety koa izay.
Ilay anarana "site saint Jo" ery amin'ny lohateny izany no laviko. Fa tsy ny hanaovan'ny ancien site momba ny sekoliny taloha akory.
Ka izay ilay efa nanazavana hoe site NON officiel ilay izy mba tsy hisian'ny resaka tsy mazava. Kanefa ve raha ohatra ka hiandry ny hevitrin'ny ancien rehetra izay amin'arivony maro tokoa ary miparitaka hatraiza hatraiza vao hanao zavatra dia hisy zavatra ho vita ve na zavatra faran'izay kely aza?
Ndraso ary jerena izay azo atao @ ilay titre.Efa misy ny fikambanana ancien ary ef a nitsanngana ela fa dia hitantsika eto ihany ny fandehany
Kanefa ve raha ohatra ka hiandry ny hevitrin'ny ancien rehetra izay amin'arivony maro tokoa ary miparitaka hatraiza hatraiza ...
Izay mihitsy ange no ataoko hoe ampifanaraho amin'izay ny anarana entiny e!
Ary sao dia efa manana site aloha izany fikambanana ancien izany? Dia manjary mifanitsaka?
Tsy mbola manana site mihitsy aloha ny ancien h@ zao tsika miteny izao (eny fa na dia ny saint jo aza...efa nisy nanangana iray tsy officiel ihany koa taloha fa tsy voakarakaran'ilay mpamorona intsony )ka izay no nahatonga ilay fikasana hoe ndao hanangana zavatra iray ho antsika ary hahafahantsika mifandray sy mifampaheno vaovao na any Mada na any an-dafy....Ka "tokony" tsy maintsy hisy fifandraisana" amin'io fikambanana( efa mijoro ara-panjakana efa ela) efa misy io ilay izy mba tsy hisian'izay fizarazarana izay.
Sahala @ mampalahelo ihany ilay sekolintsika hoe mba manana ny maha izy azy ihany nefa dia site aza tsy hananany.Ka fitiavana ilay sekolintsika io no nahatonga ilay "projet" ary niantsoana antsika mba hilaza ny hevitra sy hifanohana.Ka ny zavatra rehefa tsy atomboka dia tsy hisy mihitsy dia nanapa-kevitra ny maro hoe aleo dia hatomboka ny fananganana azy.
Lazaina mian-dalana eto ihany ny fivoarany @ lafiny rehetra.
... hanangana zavatra iray ho antsika ... hahafahantsika ...
Ilay "tsika" io, insister-ko hoà hoe farito tsara hoe hatraiza....
... dia nanapa-kevitra ny maro hoe ...
... Indrindra raha olona 5 amin'ny an'arivony no "maro" nanaiky an'ilay izy.
Manana fanontaniana koa aho:
- Efa mpikambana ao amin'io fikambanana efa mijoro ara-panjakana io ve ny olona hanao an'ilay site?
- Azonareo antoka ve fa tsy efa misy volavolan-kevitra hanangana site koa amin'io fikambanana io?
Ary farany soso-kevitra:
- Maninona raha site ho an'io fikambanana efa mijoro ara-panjakana io no atao? Matotra kokoa izy amin'izay.
Ka "tokony" tsy maintsy hisy
tokony sa tsy maintsy? Mifanohitra manko ireo
Marobe izany fangatahana fanazavana ataonao zany ry Papay.
Hametraka fanotaniana kely aho aloha alohan'ny hitaran'ilay ady hevitra mahafinaritra ataontsika.
Tena "ancien" tao marina tokoa ve aloha hianao sa olona mandalo fotsiny ianao dia mba tianao ilay miady hevitra? (tsy misy maha ratsy an'izay akory ary izay no hilàna ny forum)
Raha eny, mety mba ho fantatra ve hoe promo oviana? (tena mba hilaiko valiny io)raha tsy tianao ho valiana eto dia alefaso MP any amiko.
Maro ny zavatra "en cours" @ zao fotoana hiresahantsika izao ka tsy mbola afaka hilaza inona loatra eto raha tsy efa azo daolo ny valiny rehetra.
Ny azoko lazaina kely fotsiny hoe: tsy dia olana be loatra raha izay resaka anarana "ancien" . Betsaka ny anarana azo atao ary tsy mampiova ny votoatin'ilay site izay.
Momba ilay raha site'ny fikambanana mety hisy lafy ratsiny izay satria lasa misy "engagement" ilay izy nefa zavatra atao am-pitiavana maimaim-poana.
Tsy mbola afaka manao conclusion aho h@ zao fa dia eritrereto hoe karazana site perso aloha ilay izy dia tsy simba ny eritreritrao.Hitanao eo ihany ny "evolution".
>> Papay / Mir : tena intéressant ilay discussion - saingy efa ela ianareo no tsy nanoratra - alors où est-ce que vous en êtes ?
Sujet du message: Attn Mir
Je souhaite correspondre avec toi à propos de l'association!
J'ai quelques tuyau
Sujet du message: Re: Attn Mir
Le projet avance, j' attends tes idées, elles sont toujours les bienvenues.
Ka miandry izay resaky ricky izany e! alefaso izay mahasoa sy ny soso-kevitra rehetra